“Mendy waa goolhayaha koowaad ee kooxda Chelsea” – Lampard oo niyadjabiyay Kepa – Gool FM
(London) 21 Okt 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa sheegay in Edouard Mendy uu yahay goolhaayaha koowaad ee Blues isla markaana uu ka horeeyo dhigiisa reer Spain ee Kepa Arrizabalaga.
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ku dhawaaqday inay dhammaystirtay saxiixa goolhaye Edouard Mendy, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga Rennes, suuqii xagaaga ee la soo dhaafay.
Wax qabadka liita ee Kepa Arrizabalaga ee xilli ciyaareedkii hore ayaa keentay in maamulka Chelsea iyo Frank Lampard ay la soo wareegaan goolhaye cusub, haatana tababaraha Blues ee Frank Lampard ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mendy uu noqon doono goolhayaha koowaad ee kooxda.
Edouard Mendy ayaa ku soo biloowday kulankii xalay Seville ay barbardhaca goolal la’aanta kula galeen kulankoodii ugu horreeyay wareega group-yada ee tartanka Champions League, wuxuuna ilaashaday shaqabiisa inta ay ciyaarta socotay.
Haddaba Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa hadlay ciyaarta kaddib wuxuuna yiri:
“Mendy waa goolhayaheena koowaad?” Ilaa iyo xilligan, haa, marka la eego sida wanaagsan uu u ciyaaray, seddexdii kulan ee lasoo dhaafay”.
“Waxaan iri markii uu yimid wuxuu ku fiicnaa in la tartamo, waan ogayn tayadiisa oo wuuu soo bandhigay, laakiin way isbadali kartaa, tani waa sababta aad u haysato in kabadan hal ciyaaryahan oo isku boos ah, laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay qaabka uu ilaa iyo haatan u ciyaarayo”.